လ - နိုဝင်ဘာ 2018 | Invest Myanmar Summit 2019
လ - နိုဝင်ဘာ 2018
News / By unicode
Single-window system, better administration measures, improved intra-ministerial management, appropriate regulations, and laws: these are some of the key points the Ministry for Investment and Foreign Economic Relations will be focusing on. Formed in October 2018, the new Ministry will be taking over two existing departments – the Directorate of Investment and Company Administration (DICA) and …
New investment ministry should be ‘substance over spin’Read More »
မြန်မာ့လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း – မြန်မာ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်နိုင်ပါမည်လော
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း / By unicode
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် အိမ်တိုင်းမီးလင်းစေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မကြာမီပင် အာဏာရ National League for Democracy (NLD) အစိုးရသည် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်စေရန် အဓိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်က တိုတောင်းသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ပြဿနာမှာ ကျယ်ပြန့်သည်၊ ရှုတ်ထွေးသည် အရေးကြီးဆုံးကတော့ အလွန်အကုန်အကျများလှပါသည်။ မြန်မာအစိုးရက ၂၀၃၀ တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ အမျိုးသားပါဝါလိုင်း (national grid) နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုမှာ ၂၀၀၅ ခုတွင် ၂၂.၇ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့လျော့ခန့်မှာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိကြသေးချေ။ လျှပ်စစ်သုံးစွဲခွင့်မရကြသော ကျေးရွာများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသားပါဝါလိုင်းနှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာမျှပင် မကွာဝေးသောနေရာ၌ရှိနေကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဖယောင်းတိုင်၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးမီးဖိုနှင့် …
မြန်မာ့လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း – မြန်မာ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်နိုင်ပါမည်လောRead More »
Foreign investment reaches to US$6,119 M in 2017-18 FY
ရင်းနှီးမြုှပ်နှံမှု / By unicode
In fiscal year 2017-18, foreign direct investment reached over US$6,119 million, with most of the investment flowing into these top three sectors: Industrial, Housing and Services. According to the Myanmar Investment Commission,atotal of 28 countries are investing in Myanmar, with Singapore topping the list (US$2,263 million in 44 businesses), followed by China (US$1,397 …
Foreign investment reaches to US$6,119 M in 2017-18 FYRead More »
According to the survey performed by the Singapore Business Federation, more than 1,000 Singaporean companies have indicated their plans to invest in Myanmar over the next two years. The survey stated that the availability of favourable and transparent foreign investment regulations and skilled labour were among the top reasons for their interest to invest in …
More Singapore firms planning to invest in Myanmar in next two yearsRead More »
The Myanmar Investment Promotion Plan 2018 is meant to counteract the decline in foreign direct investments over the last two fiscal years. Projected to receiveatotal of $38.4 billion over the next 12 years, the Plan isasymbol of the Myanmar government’s commitment to an open, fair and clear investment policy. To find …
Myanmar’s Ambitious 20-Year Plan to Attract Foreign InvestmentRead More »
ေဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ် / By unicode
Genious Shan Highlands Coffee won the prestigious ASEAN Business Award in the Sustainable Social Enterprise category. Founded in 2012, the company began processing and roasting coffee beans in the Ywar Ngan Township, rapidly gaining recognition for their quality. Genious Shan Highlands currently exports its products to various international markets such as the US, Taiwan, Korea, …
Shan State Coffee Producer Wins ASEAN Business AwardRead More »
“Hong Kong is the 4th largest investor and major trading partner of Myanmar” – U Thaung Tun. With the Myanmar Government confirming visa exemptions for Hong Kong passport holders and improving on current Myanmar’s investment regulations, the two countries are working towards the next step in welcoming Hong Kong investors. Read more here. Photo by Pauline …
Hong Kong Investors eye MyanmarRead More »
Foreign Investment in Myanmar on the Rise: Deputy Minister for Planning and Finance
“We would say that there is an increase in FDI (Foreign Direct Investment) because the amount of investment allowed by the new [NLD] government from April 2016 to March 2018 amounts to 16.25 percent of the total FDI from 1988 to 2018 March” – U Set Aung As the Myanmar government works towards the goal …
Foreign Investment in Myanmar on the Rise: Deputy Minister for Planning and FinanceRead More »
Is Myanmar still an attractive investment destination?
မန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိုုမိုုတည္ၿငိမ္တိုုးတက္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုုမိုုတိုုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၎၏ သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္လူသိမ်ားကာ တမူထုူးျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေပးကမ္းပံ့ပိုုးလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ အာရွေဒသအတြင္း စီးပြားေရးတြင္ပါ၀င္ႏိုုင္ရံုုသာမက တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ တိုုးတက္လွ်က္ရွိေသာေစ်းကြက္တြင္လည္။ The Myanmar Times